Ifulethi lanamuhla esikhungweni somlando saseDresden - I-Airbnb
Ifulethi lanamuhla esikhungweni somlando saseDresden
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Hendrik
U-Hendrik Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lethu limaphakathi nengxenye yomlando yeDresden. Isango elingcono kakhulu lokuhlola inhlokodolobha enhle yase-Saxony. Uzoba negumbi langasese elinombhede wabantu ababili, ikhabethe lezingubo kanye ne-TV. Uzoba nendawo yokugezela yangasese enobhavu. Ikhishi, igumbi lokuhlala kanye nevulandi kuyindawo esingathanda ukwabelana nawe ngayo. Sihlala sivulekele izingxoxo ezithakazelisayo, ubusuku bamamuvi amade kanye nobusuku obuchitha ndawonye sipheka.
Indawo yethu iyifulethi lesimanjemanje futhi inezinsiza ezinhle esingazinikeza. Sihlala ngenhla nje kwesitolo segrosa esifinyeleleka futhi ngekheshi ngakho-ke ngeke kudingeke ukuthi ushiye isakhiwo ngenxa yalokho. Ekamelweni lakho une-TV lapho ungabuka khona uhlelo lwe-TV yaseJalimane kanye ne-Netflix ne-Amazon Prime. Uma uthanda ukugeza ungakwenza lokho kubhavu wakho omkhulu. Siphinde sibe nomshini wokuwasha nokomisa izindwangu zakho. Ikhishi lihlome ngokuphelele kuhlanganise newasha-izitsha.
4.93 · 193 okushiwo abanye
UHendrik Ungumbungazi ovelele